ဘယ်သူက GNU / Linux ကိုသုံးတာလဲ။ | Linux မှ
ဘယ်သူက GNU / Linux ကိုသုံးတာလဲ။
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အကြံပြုပါသည်
ငါရှာတွေ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါး လူသားတွေ သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသည်ကိုဖော်ပြထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည် GNU / Linux များ။ ကျွန်ုပ်မသိသောကိစ္စအချို့ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်။
ကျူးဘားသည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုများကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ကိုလည်းအံ့သြမိပါသည်။ o_O
ယနေ့ Linux တွင်ပါ ၀ င်သည့်နမူနာအချို့ကိုအသုံးပြုထားသောသေးငယ်သော်လည်းသိသာထင်ရှားသောနမူနာနမူနာကိုကြည့်ကြပါစို့။
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ dအီးအသွားအလာဖြေ - ကမ္ဘာပေါ်မှာမြို့ကြီးတွေများများက GNU / Linux ကိုမှီခိုပြီးသူတို့ရဲ့မြို့ပြအသွားအလာထိန်းချုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအားကိုးကြတယ်။ နယူးယောက်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်များမှာ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရေငုပ်သင်္ဘောစင်းကိုအမေရိကန်ရေတပ်၏နျူကလီးယားစွမ်းအင်အမေရိကန်၏နျူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘောများ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးနှင့်သေစေနိုင်သောအချို့မှာ Red Hat အခြေပြု distro ကို အသုံးပြု၍ onboard system များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။ အနက် ၅ မီတာအနက်ရှိ BSOD တစ်ခုကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါသလား။ ငါလည်း Linux ကိုဆုံးဖြတ်မယ်
CERNလူသားများတည်ဆောက်ခဲ့သောအကြီးမားဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံးစက်ဖြစ်သော Large Hadron Collider သည် CERN ၏မှီခိုမှုအားလုံးကဲ့သို့ GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသည်။ စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကို GNU / Linux ကို အခြေခံ၍ ဖြန့်ဝေထားသောကွန်ယက်ကို အသုံးပြု၍ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်မျှဝေသည်။ CERN သည်သိပ္ပံပညာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Red Linux အခြေခံဖြန့်ဖြူးသည့် Scientific Linux ကိုမွေးဖွားရာနေရာနှင့်အဓိကအသုံးပြုသည်။
ဂျပန်ကျည်ဆန်ရထားကမ္ဘာပေါ်မှာအချိန်အတော်အရှိဆုံးရထားလမ်းစနစ်ဟာအချိန်မှန်ရောက်ဖို့ GNU / Linux ကိုမှီခိုနေတယ်။ တိုကျိုနှင့်အိုဆာကာအကြား၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှစ်ခုဖြစ်သောရထားသည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ၃ မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြေးဆွဲသည်။ နှစ်စဉ် Shinkansen (ကျည်ဆန်ရထား၏ဂျပန်နာမည်) သည်တစ်နှစ်လျှင်ခရီးသည် ၁၅၁ သန်းကျော်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးအရှိန်နှုန်းမှာကီလိုမီတာ ၃၂၀ ဖြစ်သည်။
နယူးယောက်နှင့်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းနယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတက်ကြွဆုံးဖလှယ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်နေ့စဉ်နှင့်အမျှဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၅၀ ကျော်သောစတော့များနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များကိုနေ့စဉ်ရောင်း ၀ ယ်သည်။ ၎င်း၏ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံသည် Red Hat Enterprise Linux အောက်တွင်ရှိသည်။ LSE (London Stock Exchange) သည် NYSE ၏ခြေရာကိုနင်းပြီး Novell SUSE Enterprise Linux ကိုယခင် Windows Server 150 နှင့် .Net ကို အခြေခံ၍ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်နယူးယော့ခ်၏ခြေရာကိုလိုက်ခဲ့သည်။ ။ ရွှေ့ပြောင်းမှု၏ရလဒ်သည်တည်ငြိမ်သောစနစ်ဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်အားလုံး၏ရလဒ်ထက်များစွာမြန်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု။ FAA သည်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအတိုကောက်ဖြစ်သောအမေရိကန်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသာမကအခြားလေကြောင်းအထောက်အပံ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအားလည်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ ၂၀၀၆ တွင် Red Hat Enterprise Linux သို့အပြည့်အဝပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အမေဇုံကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးသည် GNU / Linux ကို၎င်း၏လည်ပတ်မှုများကိုစီမံရန်သာမက၊ Red Hat Enterprise Linux ကိုအခြေခံသည့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် distro ဖြစ်သော Amazon Linux ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Amazon သည် Cloud Computing နယ်ပယ်တွင်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ပလက်ဖောင်းအောက်တွင် Linux အခြေပြု Xen virtualization ကိုအသုံးပြုသည်။
Googleနောက်ဆုံးကွန်ယက်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Goobuntu သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် Ubuntu LTS ဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုသည့်အရေပြားထက်ပိုသည်။ ဂူဂဲလ်သည် GNU / Linux ကို၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဆာဗာများတွင်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်ကုမ္ပဏီမှပေးသောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုထားသည်။
Facebook က: Facebook သည်သုံးစွဲသူ ၁ ဘီလီယံကျော်၏အချက်အလက်များကိုပြုပြင်ထားသော CentOS ၅.၂ တွင်အလုပ်လုပ်သောဆာဗာများအားအပ်နှင်းသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ၎င်း၏ hardware (Open Compute Platform) သည် Red Hat စံသတ်မှတ်ချက်များအရ၎င်းအားအတည်ပြုသည်။
တွစ်တာTwitter သည် Linux Foundation ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆာဗာများသည် Linux နှင့်အခြားလွတ်လပ်သောနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။
ကညာမရေိကမြောက်အမေရိက၏လူကြိုက်အများဆုံးစျေးနှုန်းချိုသာသောလေကြောင်းလိုင်းသည်၎င်း၏ inflight ဖျော်ဖြေရေးစနစ်များအတွက် Red Hat နှင့် Fedora တို့ကိုပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။
တိုယိုတာ: Toyota သည်လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောဆော့ဖ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကိုထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုပြသသည့် Linux Foundation ၏ Gold အသင်းဝင်ဖြစ်လာသည့်နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Toyota မော်ဒယ်များသည်သူတို့၏ဖျော်ဖြေရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုစီမံရန် GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကွန်ယက်များသည်လည်ပတ်ရန် GNU / Linux ပေါ်တွင်လည်းမှီခိုသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြည်းတပ်သည် MQ-1 Predator ကဲ့သို့ UAVs အမြောက်အများကို GNU / Linux ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အကြောင်းပြချက် - MQ-9 Reaper မှာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မူလကသူတို့ (Windows XP) ပျက်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အတော်များများရဲ့ရွှေ့ပြောင်းမှုကစတင်ခဲ့တာပါ။ Predator ကိုယူအက်စ်လေတပ်၊ အင်္ဂလန်တော်ဝင်လေတပ်နှင့်အီတလီစစ်ဘက်လေကြောင်းမှအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မဟာဗျူဟာမြောက်အချက်များအပေါ်ပျံသန်းနေသော်လည်းငရဲအားသေစေနိုင်သောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်စေရန် Hellfire ဒုံးကျည် ၂ ခုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များဖြေ - အဲဒါကိုငါတို့ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်တွေမှာသယ်သွားနိုင်တယ်။ ဤအရာများအတွက်ဤdominရိယာ၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွှမ်းမိုးထားသည့် Android ဖြစ်သည်။ Android Inc. မှဖန်တီးပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဂူဂဲလ်မှဝယ်ယူခဲ့သော Linux kernel ကို အခြေခံ၍ ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အရေးကြီးဆုံးမိုဘိုင်း operating system တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC, Coby Kyros စသည့်ကိရိယာများအားလုံးသည် Google နှင့် Open Handset Alliance မှထုတ်လုပ်သော operating system ကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းနှင့် gadgets များစွာကိုရရှိစေသည်။
fbi။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် FBI သည်ဒေတာအမြောက်အမြားကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသောပိုမိုလုံခြုံသောစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် Linux သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ operating system မှအခြားကွန်ပျူတာများကိုသူလျှိုလုပ်ရန်နှင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစီမံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝီကီပီးဒီးယားဖြေ - ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှာအမြဲတမ်းဆာဗာတွေမှာ Gnu / Linux-based operating systems ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ မှာ RedHat နဲ့ Fedora တို့ရဲ့ဆာဗာတွေကို Ubuntu ဆာဗာစနစ်တွေကစီမံခန့်ခွဲခဲ့တယ်။
၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသောကမ္ဘာ့စူပါကွန်ပျူတာကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးကွန်ပျူတာ ၄၅၅ ခုတွင် ၄၅၅ သည် GNU / Linux မိသားစု၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
အိမ်ဖြူတော်: ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Code Red worm ဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ခံထားရသောကွန်ပျူတာများမှတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် White House ၏ဝဘ်ဆိုက်ကို DDoS တိုက်ခိုက်မှုများမှအကာအကွယ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်ရှင်အဖြစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး၎င်းတို့မှ၎င်းတို့၏ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုယူခဲ့သည်။ Solaris OS ဟောင်းသည် Red Hat Enterprise Linux သို့
Bing (Microsoft မှ)ဖြေ Bing browser က Linux မှာ run နေတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပါ http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com
နိုင်ငံအတော်များများသည် GNU / Linux ကိုအများပိုင်နှင့်စီးပွားရေးကဏ္andများတွင်အသုံးပြုကြသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ Linux ကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်အိန္ဒိယ၊ ကျူးဘားနှင့်ရုရှား၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့တွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောပထမဆုံးအနောက်နိုင်ငံသည်ဂျာမနီနိုင်ငံသည်အဆင့် ၁၀ တွင်ရှိသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အမြင့်ဆုံးလူကြိုက်များမှုသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆီလီကွန်တောင်ကြား၏နေအိမ်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ပြီး၎င်းသည်များပြားလှသောအင်တာနက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်တည်ရှိသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြန့်ချိမှု ၈ ခုသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ Ubuntu ကို သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ အီတလီ
2 ။ ကျူးဘား
3 ။ အင်ဒိုနီးရှား
4 ။ နော်ဝေ
5 ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ တော့ openSUSE သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ ရုရှားနိုင်ငံ
2 ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
4 ။ ဂျာမဏီ
5 ။ အင်ဒိုနီးရှား
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ Fedora သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
3 ။ အိန္ဒိယ
4 ။ နီပေါ
5 ။ ဇင်ဘာဘွေ
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ debian သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ ကျူးဘား
3 ။ ဂျာမဏီ
5 ။ ရုရှားနိုင်ငံ
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ ဦးထုပ်နီ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
2 ။ နီပေါ
4 ။ အိန္ဒိယ
5 ။ ကျူးဘား
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ Mandriva သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
4 ။ ပြင်သစ်
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ Slackware ကိုတီထွင် သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
2 ။ အင်ဒိုနီးရှား
3 ။ ဘရာဇီး
4 ။ ရုရှားနိုင်ငံ
အများဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူနိုင်ငံများ Gentoo သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
5 ။ အက်စ်တိုးနီးယား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » ဘယ်သူက GNU / Linux ကိုသုံးတာလဲ။
124 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ထိုအခါစပိန်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထွက်လာဘယ်တော့မှolé, အသက် xd bulls အသက်ရှင်
SAludos သည်ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်စပိန်တွင်မည်သို့သွားနေသည်ကိုရှင်းပြသည်။ http://is.gd/NyqJa0
pandev ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်နိုင်ငံတွင် "manolete Gnu / Linux" ကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းသည် bullfighting လောက၏အဓိကအာရုံစိုက်။ လှုံ့ဆော်မှုပေးသော Linux ဖြစ်သည်။
HAHhahahahaa, XD ကိုသိရန်သွားပါ၊ Gnu / Belen distro လည်း ahahahaa ကိုအစေခံနိုင်သည်
eliotime ၃၀၀၀ ဟုသူကပြောသည်
ငါ GNU / Belénဟာသကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး
Belen ငါသူတို့မင်းသမီးဟုယူဆရသောBelén Esteban ကိုရည်ညွှန်းမည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်သည်။ သူ၏တစ်ခုတည်းသောကောင်းကျိုးမှာကျွဲနွားတိုက်ဖျက်သူနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ..
ပီရူးမှာသူမကဘာမှထူးထူးခြားခြားလူသိများတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုခင်ဗျားသတိပေးပြီးသားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇာတ်လမ်းဟာဆိုဖီယာဖရန်ကိုလို့ခေါ်တဲ့ပြပွဲစီးပွားရေးအစီအစဉ်မှာသူမခင်ပွန်းနှင့်ရှုပ်ထွေးနေပြီးရလဒ်အနေဖြင့်သူမအလွန်ဆိုးရွားစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သောအရှုပ်တော်ပုံ၏မျက်နှာ၌ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးဒီမှာအနုပညာရှင်ဇာတ်ကောင်များ၏တစ်ယူသန်ဆန်ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်အများကြီးကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
PS: ပီရူးနိုင်ငံမှစာဖတ်သူတစ် ဦး ဦး နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးနှစ် ဦး ဖြစ်သောBelénEstévezနှင့်Belén Esteban ကိုမရောထွေးပါနှင့်။
သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့စာရင်းကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားမှုကသိပ်တော့မရှင်းလင်းပါဘူး။ စပိန်နိုင်ငံတွင် GNU / Linux ကိုများများသုံးသည် (ငါတို့ထုတ်လုပ်သောလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရုံသာ)
၎င်းသည်အလွန်မှန်ကန်ပြီးယခုလက်ရှိတွင် linux သို့မဟုတ်အချို့ linux ကိုအသုံးပြုသောပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးနေပြီးကျူးဘားနှင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံများသည်လည်းလက်တင်အမေရိကရှိအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်များကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ဥပမာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Linux http://is.gd/qKJc9q
အမှတ်3တွင်, သင်သည်အဘယ်ကြောင့် Fermilab ဖယ်ထုတ်ထားသလဲ ; _;
မှ Ian ဟုသူကပြောသည်
Point 13၊ thismmm နှင့် XP သည်အတူအလုပ်လုပ်သည် ??? အို_O
Diossssssss နှင့်အချို့ကကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံသည်ဟုပြောကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် XP သည် XP များစွာရှိသေးသည် ဖြစ်၍ ငါတို့တစ် ဦး တည်းကိုသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သင်မြင်လိမ့်မည်။
Pff ငါဆိုသည်ကားအတူတူပါပဲ xp နှင့်အတူမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များထိုအတူပါလာသောပါရမီကားအဘယ်သူနည်း
(/ -) / ~ ┻┻┻┻彡☆★
အလွန်အရေးကြီးသောကဏ္ sector တစ်ခုမှာပျောက်ဆုံးနေပြီး Linux သည်ဝါရင့်နေရာ - ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
Titanic (၁၉၉၈) တွင်ရှိပြီးသား Linux ကွန်ပျူတာများကိုအထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Avatar မပြောရန်) ကိုပြရန်အသုံးပြုသည်။ Pixar နှင့်အဓိကထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးကိုစီမံရန် Linux ဆာဗာများကိုအသုံးပြုသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာက Linux မှာ support လုပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသော animation program ဟာ animation အတွက် Maya ပါ။
ယေရှုခရစ်သည်အစ္စရေး Perales Martinez ဟုသူကပြောသည်
ရှည်လျားသော tequila wey နေထိုင် !! 😛
Jesus israel perales martinez အားပြန်ပြောပါ
hahaha, ငါမက္ကဆီကိုမှာသူတို့ကအဲဒါကိုအများကြီးသုံးတယ်လို့ငါထင်တယ် .. Linux ကိုသုံးသူအများစုဟာမက္ကဆီကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသတိပြုမိတယ်။
cookie ကို ဟုသူကပြောသည်
အသက်တာရှည် Taco အသက်ရှင်! အဆိုပါ loggerheads အတူတက်!
အန်တိုနီယို Galloso ဟုသူကပြောသည်
ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအကြား GNU / Linux အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်။
Antonio Galloso ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့အိမ်ထဲမှာ elementaryOs ကိုသုံးတယ်
linux ကို "ရောင်း" ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ desktop ပေါ်တွင် malware အန္တရာယ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်မှသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ် XD မထိုးဘဲတိတ်ဆိတ်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ငါလည်း porn ကိုကြည့်ဖို့ Linux ကိုသုံးတယ် (၀ င်းဒိုးထက်အများကြီးပိုလုံခြုံတယ်) ဝန်ခံတယ်။ #GuiltyPleasure
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်လူကြီးလူကောင်းမှလာကြပြီ !! xD
သင့်အနေဖြင့်သင်၏စနစ်သည်အနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကောင်းသည့်အချိန်တွင် (ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်ကိုသင်သိလျှင်) အေးခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်းသင်အာမခံထားသည်။
ooooooo ငါလည်းဟဟား၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်မှာသူ့ဖေဖေကို Fedora ကိုယုံကြည်စေခဲ့တယ်။
ငါအမှတ် 19 xD မှာရယ်မောရပ်တန့်လို့မရပါဘူး
တီဗီမှာကြည့်နေတဲ့ BSD အတွက် +++ !!! +++
Bing အနေနှင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး မည်သို့ရှာဖွေသည်၊ ၎င်းသည် Linux သို့မဟုတ် windows server သို့သွားသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်
မင်းကြည့်နေတယ် http://www.bing.com, linux ကိုသုံးပါ
သို့သော်သင် bing.com ကိုရှာဖွေလျှင် Windows server သို့မှော်အတတ်ကိုသွားသည်
ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဟာ Akamai ကိုသုံးပြီး ၀ င်းဒိုးဆာဗာကိုသုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာများမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်ဖို့သုံးတယ်။ ဒါ့အပြင်ထူးဆန်းတဲ့ server မှာအနည်းဆုံး CentOS 6.4 ရှိတယ်၊
ရုရှားသည်ထိပ်ဆုံး ၅ စာရင်းသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးတွင်ပါ ၀ င်သည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်မြို့သူမြို့သားများစွာနှင့်ငွေပေးချေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာကိုမျှတရုတ်နိုင်ငံကိုမမြင်ပါ။ linux ကိုထောက်ပံ့ပေးသော WINDOWS, hahaha.normal gates သမီးကအသုံးပြုသည်။
"အကျိုးစီးပွားပိုမိုများပြားသောနိုင်ငံများ" သည်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူ ဦး ရေအရေအတွက်သည်ယင်းနှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အကယ်၍ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပါကတရုတ်နိုင်ငံတွင် "Ubuntu" အမျိုးသားနှင့် Ubuntu သည်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။
Netcraft အစီရင်ခံစာကိုကောင်းစွာကြည့်ပါ။ Microsoft သည် Bing တွင် Linux ကိုမသုံးပါ။ Akamai က ၄ င်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော CDN ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ဆာဗာပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် Microsoft သည် Netcraft ကိုအသုံးပြုသောအခါဆာဗာများအတွင်း (Xen, VMWare သို့မဟုတ် Parallels အတိအကျမဟုတ်သော) virtual machine များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Netcraft ကိုအသုံးပြုသောအခါ Windows Server 2003 ကိုအသုံးပြုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင် Linux သုံးလျှင်၎င်းကိုသုံးသည် (နှင့်သူတို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်လည်း Apple) ။
Jose Miguel ဟုသူကပြောသည်
ကျူးဘားကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မပြောင်းလဲဘူးလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် ...
José Miguel ကိုပြန်ပြောပါ
ငါကျူးဘားပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဂျာမနီသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ပိုမို distros အတွက်ပုံပေါ်, ဘယ်လိုတကယ်တော့ gringos မဆိုထိပ်တန်း5မှာမပေါ်လာကြောင်းဘယ်လိုသိချင်ပါတယ်
ငါ "လိုအပ်" နှင့် "ထောက်လှမ်းရေး" သော့ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသည် KDE, Linux နှင့် ပတ်သတ်၍ အရေးကြီးဆုံး distros များဖန်တီးထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်မြို့ကောင်စီတစ်ခုလုံးသည် Linux သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့သူတို့စာရင်းပြုစုထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံကသူတို့အများစုဟာကာကွယ်ရေး၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ အာကာသအာကာသမှာ Linux ပေါ်မှာရှိတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် GNULinux ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမတစ်ခုမှာလိုအပ်သည်။ အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်က ၀ ယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကမကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်။
ဒုတိယ "ထောက်လှမ်းရေး" ဖြစ်ပါတယ်။ GNU / Linux သည်ခေတ်မီ။ လက်ရှိစနစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် GNU / Linux ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည့်စီးပွားဖြစ်စနစ်တစ်ခုအတွက်ငွေပေးချေရန်မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။
အဲဒီမှာအင်တာနက်သုံးတဲ့လူ ဦး ရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုမင်းစဉ်းစားလား။
ထိပ်တန်း RED HAT နှင့် SUSE distros များ။
Windowsero ပါ ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်ထိုဥပမာအားလုံးသည် server side ဖြစ်သည်။
linux ရှိ desktop နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
Ubuntu သည်စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ desktop အသုံးပြုသူ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ၁% သည်အမှန်တကယ်သုံးစွဲသူများကိုမရေတွက်နိုင်သောကြောင့်လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင် operating system နှင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော PC များဖြစ်သည်။ ဤသက်သေအထောက်အထားသည်ဤဆောင်းပါး၌ဖြစ်သည် https://blog.desdelinux.net/debunking-the-1-percent-myth-traducido-al-espanol/
Ubuntu သည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်ကတည်းက Linux သည် desktop များပေါ်တွင်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
သင်္ချာအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၏ ၁%! = ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ ၁% သည် linux တိုးပွားလာသည်ကိုသတိရပါ။ ပြcomputerနာမှာကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများလည်းတိုးပွားလာနေသည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပီစီများ၏သိသိသာသာခေတ်မမှီတော့သောအသုံးအနှုန်းများအရများစွာသောသူတို့သည် Slackware, Xfce / Lxde နှင့်အတူ Debian နှင့် / သို့မဟုတ်ယခင်ဖော်ပြခဲ့သော GUIs များနှင့်အတူ Arch distro ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
Cubans များအတွက်အလွန်ကောင်းသော !! အညီ Debian ကိုယ်စားပြုပေးခြင်း!
ဗင်နီဇွဲလားနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့မပေါ်လာဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့မှာ shitty အစိုးရတွေရှိတယ်။ ဘယ်ဘက်ကဘယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်၊ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်ခံနေရတာ။ ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "နိုင်ငံရေးသမားများ" ဖြစ်သည်။
ကောင်းပါပြီ၊ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အာရပ်နိုင်ငံများ မှလွဲ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်လက်ယာဝါဒီအာဏာရှင်အစိုးရကိုမျှကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။
စပိန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ... မရှိ ...
Hala Alberto, သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ပါစေ။ မင်းကစပိန်မှာမပျော်တာ၊ အသွင်အပြင်တွေကြောင့်ဖိနှိပ်ခံရတာမို့ Willy Toledo နဲ့အတူကျူးဘားကိုသွားရင်ကောင်းမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့f... မိခင်တစ်ယောက်ရှိလို့ပဲ။ သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလားသို့ (ဟုတ်ကဲ့၊ အိမ်သာထဲသို့ယူပါ။ )
Ehem ehem xDDD ။ ညမှာအရက်မသောက်တော့ဘူးစပိန်မှာမျက်နှာပြအစိုးရမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းလိုလူတွေဟာသူတို့ကို xD တိုင်းပြည်ထဲကနှင်ထုတ်ပြီးပြီ။ လူငယ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလူငယ်များကိုခေါ်ဆောင်လာသူတစ် ဦး မှပြောကြားသည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်မျက်နှာစာများမဟုတ်ပါ၊ အရင်းရှင်များ၊ ဒီမိုကရက်များသည်မျက်နှာစာများမဟုတ်ပါ။
အဲဒီမှာမင်း ငါသူတို့နှစ်နှစ်ထက်မနည်းသောအာဏာအောက်၌အာဏာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်မှအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အချိန်မရကြပါ။ သို့သော်မရရှိလျှင်၊ သင်၌ပညာရေး၊ မသင်မနေရဘာသာရေးပညာရေး၌ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အာဏာရှင်တွေဟာမျက်နှာစာတွေပါ။ ဖက်ဆစ်ပြည်နယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကအတုအယောင်တွေပါ။
ငါ Willy Toledo မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီတံတွေးကအများကြီးကိုဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ abc drool ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်။
Wilbert Isaac ဟုသူကပြောသည်
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျူးဘားမှာသူတို့မှာအစိုးရလက်ဝဲမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာရှိနေတယ်။ သတင်းတွေထွက်လာတယ်၊ ကျူးဘားမှာဘယ်ဘက်အစိုးရရှိနေပြီဆိုတာကိုငါကြားတယ်။ ဒါကိုကြားဖူးတယ်!"
Wilbert Isaac အားပြန်ပြောပါ
ကိုယ်မင်းကိုနားမလည်ဘူး။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သောအစိုးရသည်ဘယ်ဘက်တွင်မရှိပါ။ ငါကျူးဘားကိုငါသိ၏သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျူးဘားတွင်အလွန်ကောင်းသောအရာများရှိသော်လည်းအခြားအရာများတော့မဟုတ်ပါ။
ဘယ်လောက်ထူးဆန်းသည်ဗင်နီဇွဲလားနှင့်အာဂျင်တီးနားမြေပုံပေါ်တွင်မဟုတ် ... အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် Debian ကို အခြေခံ၍ Canaima ကျောင်း၏ကွန်ပျူတာများနှင့် netbook များနှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲစာမျက်နှာများကိုသင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူနိုင်သောဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုရှိသည်။
အာဂျင်တီးနားတွင်အမျိုးသားစီမံကိန်း ၃၅၀၀,၀၀၀ အားစုစုပေါင်း netbook ပေါင်း ၂,၈၀၀,၀၀၀ နီးပါးကိုကျောင်းများသို့ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ Huawea (Based Debian အပေါ် အခြေခံ၍) ဟူဂျူစကားသည်ဖိုရမ်အပြင်“ လေ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ Canaima လိုပဲ။ လျှို့ဝှက်ကွန်ပျူတာများတွင် Huayra ကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါအာဂျင်တီးနားဖြစ်တယ်၊ ငါပြောတဲ့ distro နှစ်ခုထဲကငါ canaima ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ အဲဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ပိုလိုတယ်။ ငါတို့ Huayra တွင်ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းရှိပြီးအမှားများစွာလည်းရှိသည်။ netbook များအတွက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါသည်, ငါ့နိုင်ငံ၏ကျောင်းများရှိကလေးများ, သူတို့က netbook နှင့်အတူပတ်ပတ်လည်အရူးလုပ်န်းကျင်သွားကြသည်နှင့်သူတို့ဘာမှမလေ့လာကြဘူး, ပထမ ဦး ဆုံးသင်သည်သူတို့၏ခေါင်းကိုအသုံးပြုရန်သူတို့ကိုသင်ပေးရန်ရှိသည်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလိမ့်မည်အသိပညာအတွက် စက်တွေ။ အာဂျင်တီးနားတွင်အလွန်ဆိုးဝါးသောပညာရေးမူဝါဒ
ခင်ဗျားရည်ညွှန်းထားတဲ့အမျိုးသားအစီအစဉ်ဟာအာဂျင်တီးနားမှာလူတွေမဟုတ်ဘဲမြည်းတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​netbook အစီအစဉ်ကမဲအများဆုံးရဖို့ဖြစ်တယ်၊ ပညာပေးဖို့မသုံးဘူး။
ကောင်းပြီ PEDRO နှင့် Juan, ငါ့ကိုမသတ်ပါနဲနဲ။ ။ ပြissueနာကသန်းပေါင်းများစွာသော netbook တွေဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင်၊ Base က Debian ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကစပြီးအာဂျင်တီးနားမှာ Ututo distro ဖွံ့ဖြိုးဆဲ Via Libre Foundation လာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အာဂျင်တီးနားပင်လယ်ဓားပြပါတီသည် GNU / Linux ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အာဂျင်တီးနားပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတာဝမ်းနည်းစရာပဲ။ netbook များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်အခမဲ့ wifi အခမဲ့အင်တာနက်ရှိသည့် netbook များပြည့်နှက်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏မြို့ရင်ပြင်တွင်… .. chatting ။ အာဂျင်တီးနားသည် Linux သင်ယူရေးလမ်းကြောင်းအတွက်ပျင်းရိသလား။
OpenDNS သည် linux ကိုအသုံးပြုသည်။ windows updates များအတွက် linux server အချို့လည်းရှိသည်။
ucha နှင့်မကြာသေးမီကရိုင်ဖယ်အတွက် gnu / linux ကိုထည့်သွင်းခဲ့သဖြင့်အများအပြားက patatus ကိုပေး၏
Juan Carlos ဟုသူကပြောသည်
သိသာထင်ရှားတဲ့ Facebbok နဲ့ Twitter ဟာသူတို့ဘယ်လောက်များများဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားအသုံးပြုကြသည်။
Juan Carlos ကိုပြန်ပြောပါ
Facebook သည် CentOS 5.2 ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ဆာဗာများအတွက်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအဖြစ် Ruby on Rails ကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုပြီးအဆင်ပြေတာက identi.ca ဖြစ်ပြီး Twitter ထက်ပိုတော်တယ်။
Identi.ca သည် Pump.io သို့ရွေ့သွားသည်။ ယခုလ ၈ ရက်နေ့အကူးအပြောင်းအဆုံးသတ်သွားပြီ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲမြင်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်။ အုပ်ချုပ်သူများ၏အဆိုအရကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောင်းရွှေ့သွားမည်၊ ငါ Pump.io သည်မည်သည့်ထူးခြားသည့်စိတ်ကူးမရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ site က identi.ca ထက်ပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
trolled ကြောင်း hahaha Microsoft xDDDD ။ 19 xD အပေါ်ကောင်းသောအချက်
ငါမိုက်ကရိုဆော့ဖ Linux ကို (နှင့်အထူးသဖြင့် CentOS) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုငါသိပြီးသား။ Apple က၎င်းကိုလည်းသုံးသည် (သူတို့ OSX အစား OpenBSD ကိုသုံးသည်ဟုထင်ရန်)
osx XD ကိုတည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့်ခေတ်မီသလား။
MacBook ဒါမှမဟုတ် iMac တောင်ဝယ်ဖို့ငါ့မှာပိုက်ဆံမရှိပေမဲ့မင်းရဲ့ operating system မှာဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ်။ XCode နဲ့ပရိုဂရမ်ရေးချင်တယ်။ တော်တော်လေးဖော်ရွေပြီး C ++ ကိုပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Cupertino စနစ်သည် NT ကဲ့သို့အားနည်းသော်လည်းသူ၏ kernel သည်ကောင်းမွန်သောမျက်လုံးသကြားလုံးရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့တိုင်းပြည်ဟာဟဟဟဟားဟားဟားဟားဟားမလို့မပြောသင့်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းက XD တစ်ခုခုကိုထွက်လာအောင်မကူညီနိုင်လို့ပဲ
ကျွန်တော့်အတွက်ဟန်ဆောင်ဟန်ရှိသည့် Mac operating system မှ linux ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းတင်ပြပါ
အခုငါ Mageia3ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်မဟုတ်သည့်ကျွန်ုပ်၏ကျိုးနွံသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကောင်းစွာလည်ပတ်နေသည်။ ငါအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာငါ GNU / LINUX ဖြန့်ဝေခြင်းကို windows system များသို့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒီ preference ကိုဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်သူအပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
hernando sanchez အားပြန်ပြောပါ
Red Hat Enterprise Linux သည် OO အမြောက်အများရရှိနေသည်
ခေတ်မမှီသောဆာဗာများနှင့် / သို့မဟုတ်ပီစီများ၌၊ ဟုတ်ကဲ့၊ လက်ရှိ PC များမှာငါသံသယဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူက backports တွေဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ်သုံးချင်တဲ့သူကို PC တွေကိုအသုံးချမှာပဲ။
ဗားရှင်းအသစ်သို့ပြောင်းသည့်အခါမှီခိုမှုများပျက်ပြားသွားနိုင်သည်၊ သို့သော် RHEL / CentOS မှသူတို့ကြီးမားသော bug ကိုပြင်ဆင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
တစ်ခုမှာအကျိုးစီးပွားပြီးတော့အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးဘားနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးသဘောတရားကြောင့် GNU / Linux နှင့်ပိုမိုဆင်တူသော်လည်းအခြားနိုင်ငံများထက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းသည်
ငါလိုအပ်သည်နှင့်အညီတစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် distro နှင့် desktop ကိုရှာဖွေခြင်းသည် inux ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ယက်ပုံနှိပ်စက်များသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အကောင်းဆုံး Debian distro, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေလိုပဲ၊ သင်ကအလိုရှိသမျှအတိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ဖြည့်စွတ်ဖိုင်များကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ရမယ်၊ ငါ windows 8 မှာ configure လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒီကနေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သုံးစွဲသူလိုအပ်သမျှအားလုံးကို Linux distro တစ်ခုလုပ်ပြီး around တော့ around လောက် going မ without လှည့်ဘဲမ make လုပ်ပါ။
Mr Black ဟုသူကပြောသည်
သုံးစွဲသူစီမံခန့်ခွဲမှု“ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ယက်ပုံနှိပ်စက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဘယ်သောအခါမျှမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ” ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်နားမလည်နိုင်ပါသလား။ ကွန်ရက်ပရင်တာများ? ဆာမဘ
"အခုမှစပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သုံးစွဲသူလိုအပ်သမျှအားလုံးကို Linux distro တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး around ည့်သည်တွေအများကြီးသွားစရာမလိုပဲလုပ်နေသည်။ " Ubuntu နှင့် Linux Mint တို့ကဲ့သို့သောပိုမိုလွယ်ကူသော distros များကိုသင် codecs မတပ်ဆင်သော windows များ၌မစမ်းသပ်ခဲ့ပါ။ Flash Player? ဂျာဗား? မင်းနားမလည်ဘူး။
Mr Black အားပြန်ပြောပါ
ငါက Dyne CD ကိုသုံးတယ်။ golic ၂ ခုထက်ပိုပြီးအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်၊ IceCat ကို browser တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတယ်။ Gimp, Inkspace, Cinelerra၊ ငါကအသံနဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်။ Tor၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်တဖြည်းဖြည်းလေ့လာသင်ယူသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုတပ်ဆင်။ မရပါ၊ Debian နှင့် Open Suse ကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ပါမည်။ ဒါပေမယ့်ဆော့ဗ်ဝဲကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါကပြproblemsနာမရှိဘူး၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ windows မှာအရာအားလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကို install လုပ်ဖို့ကငြီးငွေ့စရာမဟုတ်ပါဘူး antispyware၊ ကဒ်ဒရိုင်ဘာအသစ်များ၊ .NET နှင့်များစွာသော malware များပြတင်းပေါက်များ၌တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်တွန်းအားပေးသည်။
apt-get နဲ့ configure လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ linux ကိုကျွန်တော်ဆက်နေပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်၊ ယခု မှစ၍ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်သုံးစွဲသူလိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်မတူဘဲ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုလုံးကိုပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်စေပြီးအရာရာကိုလှည့်ပတ်မသွားဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီအတွက် Mageia3 ကိုကျွန်တော်အကြံပြုသည်။ (လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှထွက်ပေါ်လာသည်။ ) လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ Mandrake / Mandriva ကဲ့သို့ပင်သုံးစွဲသူများသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်နောက်ဆုံးသုံးစွဲသူကိုအလေးထားသည်။ Mageia သည် Mandrake / Mandriva ၏လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်ပြီး ၁၀၀% သောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ အဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အခြား distros များရှိလိမ့်မည်, ငါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒီတစ်ခုအကြံပြုပါသည်။
ငါမှာသူတို့ Linux ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာနောက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်Concepción - ချီလီမှဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် "Bio-bío buses" ဟုခေါ်သည့်ဘတ်စ်ကားနှင့်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသေးသည်။ Fedora ကို gnome 2.30 ဖြင့်အသုံးပြုဆဲ !!!! လက်မှတ်ဝယ်ဖို့သွားတဲ့အခါသူတို့ဟာ Fedora ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိပြီးအရောင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ဟာ terminal မှစတင်နေပြီဆိုတာ !!! ပြီးတော့သူတို့ဘာကြောင့်ဒီ xd operating system ဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲလို့ကျွန်တော်မမေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အရောင်းဝန်ထမ်းကပြတင်းပေါက်တွေကအမြဲတမ်းပြိုလဲနေတယ်၊ ​​ကုန်ကျစရိတ်နဲ့အရည်အသွေးကြောင့် fedora ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်၊ ကွန်ပျူတာစနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ သူမတုန့်ပြန်မှုကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာ၊ ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျေနပ်တယ်၊ ငါတို့ကအခြားကမ္ဘာတစ်ခု၊ အသစ်အဆန်းအသစ်တွေ၊ ငါဒီအစီအစဉ်ကိုသဘောတူတယ် ... ကောင်းပြီဒါကငါ့ရဲ့အလှူငွေပါ .. xd
ကောင်းပြီ၊ လက်ရှိတွင်နိုင်ငံများစွာသည်မက္ကဆီကိုရှိ Linux distro ... အလွန်ဆိုးရွားနေပြီဖြစ်သည်။ သင်သွားလေရာရာ၌ Windows၊ ကျောင်း၊ ဆိုက်ဘာနှင့်စသည်တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတလေ monotony ဟာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ငါဥပမာဆိုက်ဘာကိုသွားတိုင်း Live USB session ကို wifislax ဒါမှမဟုတ် backtrack နဲ့စတယ်။ ငါဆိုက်ဘာမှသော့များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုဂရုစိုက်သည်။ ၎င်း၏မျှသာ Achilles ဖနောင့်ပေါ်မှာ။ သို့သော်ဟေး၊ အချို့က Linux သည် M $ ​​သို့မဟုတ် OS X ထက်အဆ ၉၉၉ ဆပိုကောင်းသည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Linux သည်သင်အနည်းဆုံး ၉၉.၉% သေချာစွာလုပ်ထားသောစနစ်သည်သင်အမှန်တကယ်လုပ်လိုသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။
Long live linux !!!
Arch သို့မဟုတ် Chakra ကိုသုံးပါ၊ ၎င်းကိုသင့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နေ့ရက်များကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။
Linuxito ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Bing ဟာ ​​Linux ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမယုံဘူး !! ဒါဟာနောက်ဆုံးကောက်ရိုး hahaha ပါ
ထိပ်တန်း ၁၀ ခုကိုကြည့်လျှင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများသည် GNU / Linux ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒီမှာအာဂျင်တီးနားမှာရှိနေတဲ့နှောင့်နှေးမှုကဝမ်းနည်းစရာပဲ။ သင်ဟာ developer တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ဒီနေ့သူတို့ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ငွေရှာလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်။
blaxus ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
စရိုက်စေရန်အားလုံးစက်တွေ http://www.loteriasyapuestas.es သူတို့က linux ကိုလည်းသုံးတယ်။ စက်ဟာအလိုအလျောက်လောင်းကစားပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် algorithm ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ Tux သည်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်စေနိုင်သည်။
Cuba ဆိုတာ Linux ကိုဘာကြောင့်သုံးတာလဲ။ ငါအံ့အားသင့်သွားမှာပါ။ ကျူးဘားက Mocosoft ကိုသုံးတဲ့နိုင်ငံစုံ Yankee ကိုပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
နာမည် (လိုအပ်သည်) ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းလဲ ၎င်းသည် "ကမ္ဘာ့ဘယ်ထောင့်များတွင် ... " နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံး operating system ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အမည်သို့ Reply [လိုအပ်သည်]
ဒါဟာအချည်းနှီးမဟုတ်ပေမယ့် CERN မှားသည်! (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း)
CERN တွင်ဝန်ထမ်းများသည်များသောအားဖြင့်ပြတင်းပေါက်များ (အများစုသည်အများစု) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှု၊ လက်လှမ်းမီမှုနှင့်သိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်မှုစနစ်များ၏ဆာဗာများသည် Linux ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၀ င်းဒိုးများကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသည်။ အသုံးအများဆုံးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များမှာ project အပါအ ၀ င်ပြီးပြည့်စုံသောရုံးအစုံ (share အပါအဝင်) နှင့် sharepoint ဖြစ်သည်။ သင်အနည်းငယ်ကြည့်ရှုရန်နှောင့်နှေးနေလျှင်စာမျက်နှာအမြောက်အများကို sharepoint တွင်အသုံးပြုသူများကပြုလုပ်သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီဇိုင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ကက်စီယာ၊
ငါ CERN မှာအလုပ်လုပ်တယ်၊
IBM က၎င်းကိုလက်ပ်တော့နှင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအကြားကျယ်ပြန့်မကျေနပ်မှုနှင့်အတူ။
Jordi val ပါ ဟုသူကပြောသည်
International Space Station (ISS) သည် Linux ကိုလည်းသုံးသည်။
Jordi val ကိုစာပြန်ပါ
« Bing (မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှ): ဒီဟာကထူးဆန်းပေမဲ့တကယ်တော့ Bing ဘရောက်ဇာတွင်ဆာဗာများသည် Linux ပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပါ http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com»
ကျေးဇူးပြု၍ Akamai သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးရှိတဲ့ပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄ င်း၏ဆာဗာများကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေနေသောကြောင့် DDoS ၏ကာကွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အကြောင်းမှာ Round Robin DNS ကို အသုံးပြု၍ ၄ င်း၏တိုက်ခိုက်မှုကိုခက်ခဲစေသည်။
Microsoft မှ GNU / Linux ကိုသုံးသည်ဟုဆိုခြင်းသည်သင်၏ Microsoft ဆာဗာများ၏ရှေ့တွင် GNU / Linux ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
"FBI: ၂၀၀၂ မှာ FBI က Linux ကိုပြောင်းရွှေ့လာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအချက်အလက်ပမာဏကြီးမားစွာကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ပိုလုံခြုံတဲ့စနစ်ဖြစ်လို့ Linux ကိုပဲသုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ operating system ထဲကတခြားကွန်ပျူတာတွေကိုစူးစမ်းဖို့နဲ့လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ကွန်ယက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာကပိုလွယ်တယ်။ "
အခြားအရာတစ်ခုကတော့ GNU / Linux ကိုအခြားကွန်ပျူတာများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းပဲ။ ဒီသတင်းကိုရေးတဲ့သူကဟက်ကာရုပ်ရှင်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ငါ GNU / Linux နဲ့ UNIX ကိုငါကြိုက်တယ်၊
စာရေးသူသို့ - ကျူးဘားသည်အထူးသဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်အထူးသဖြင့် GNU / Linux ကိုနှစ်သက်သောကြောင့်သင်ဘာကြောင့်အံ့အားသင့်သင့်သနည်း။
KZKG ^ Gaara ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးကျူးဘားတွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် SWL အသိုင်းအဝိုင်း၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနီးပါးဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရသည် SWL ကိုထောက်ပံ့ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သိလိုသည်မှာအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မဟုတ်မမှန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
KZKG ^ Gaara သို့ပြန်သွားပါ
စာမျက်နှာပေါ် အခြေခံ၍ Bing linux ကိုသုံးသည်ဆိုခြင်းမှာမမှန်ကန်ပါ။ http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com.
သတင်းအချက်အလက်သည်အကြီးဆုံးဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက် (CDN) ဖြစ်သော Akamai ၏ဆာဗာများမှလာသည်။ Bing သည် Akamai ကိုသုံးသည်။ သို့သော် CDN ၏နောက်ကွယ်တွင်အမှန်တကယ် Bing ဆာဗာများသည်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာများအရ, frontends ဟာ Windows ပေါ်မှာဖြစ်ကောင်း ASP.Net အပေါ်အခြေခံသည်။
ဒါပေမယ့် Akamai က Linux ကိုသုံးတယ်၊ ဒါကြောင့်အင်တာနက်အသွားအလာရဲ့ ၂၀% နီးပါးရှိတယ်။
အာဂျင်တီးနားတွင်အလယ်တန်းကျောင်းသားများအားအစိုးရမှပေးသောကွန်ပျူတာများသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အများစုမှာ ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဆရာမများသည်ဤစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတအနည်းငယ်သာရှိသည်။ pcs linux နဲ့သာလာရင်သန်းနဲ့ချီပြီးကယ်တင်နိုင်တယ်။
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကို BULMA ထဲကငါ့ရဲ့နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလေးစားမှုအားလုံးနှင့်အတူ ... ခင်ဗျားဟာ Linux ကိုကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှာအဓိကမြှင့်တင်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများနှင့် Junta de Extremadura ကိုမေ့သွားပြီထင်တယ် ဘီလ်ဂိတ်၏အဆိုအရ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသူ၏အဓိကရန်သူဖြစ်သည်။ Lineal ဖြန့်ဖြူးမှုမှ စ၍ Andalusian Guadalinex သည်အခြားသူများနှင့်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းပုံစံကိုလက်တင်အမေရိကရှိနိုင်ငံများစွာသို့တင်ပို့ခဲ့သည်။ သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ညီလာခံကိုရံဖန်ရံခါစီစဉ်ခဲ့သည်။
ကျူးဘားသည်၎င်း၏မြင့်မားသော Gnu / Linux အသုံးပြုမှုကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
ကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ကစီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာ Trojan၊ Backdoor သို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာချို့ယွင်းချက်များမပါ ၀ င်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်တွေစသည်တို့ကိုခိုးယူခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အခြားလုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များသည်၎င်းတို့ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် Gnu / Linux ကိုအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gnu / Linux သည် Carrefour ငွေရှင်းကောင်တာများတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Avianca ကုမ္ပဏီ၏ AirBus A300-200 လေယာဉ်ပျံတွင်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ခရီးသည်ထိုင်ခုံ၏နောက်ကျောတွင်တွေ့ရသောမော်နီတာများ။ ငါ Mageia3 ကိုငါ့လက်တော့ပ်မှာသုံးတယ်၊ အိမ်မှာကွန်ပျူတာ ၂ လုံးထပ်ထည့်တယ်၊ တက်ဘလက်တွေပေါ်မှာ FirefoxOS version နဲ့ tablet တွေအတွက် Plasma Active (KDE) ထွက်လာဖို့စောင့်နေတဲ့ Android တက်ဘလက်တစ်ခုလည်းပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... အသက်ရှည်ပါစေ! အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ !!!
အစဉ်မပြတ်ငါ Mageia အကြောင်းကိုစပ်စုခဲ့ပါတယ်။ ဒီ distro ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ
ငါမျှဝေပြီးသားဖြစ်သည်။ Linux အသိုင်းအဝိုင်းမည်သို့လှုပ်ရှားသည်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်
သူမ xp မသုံးခင်ကတည်းကသူမ xp ကို AIDS မခံခင်ငါ့မက္ကဆီကန်ရည်းစားလည်း
linux ကိုသွင်းထားသည့်မှတ်စုစာအုပ်များသာမကဘဲအခမဲ့ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် (၂) ခုရှိသည်။ Scholarships F နှင့် A control (Totally Federal)၊ အခြားအရာများအကြား GNU / Linux ကိုလေ့လာနိုင်သည့်အပြင် CFP Professional Training Centre ရှိကြောင်းကိုလည်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏သူငယ်ချင်း Menem၊ de la Rua နှင့် Alfonsin တို့၏ကျန်ရှိသောပညာရေးကွာဟချက်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားသည် (အပြည့်အဝအခမဲ့နှင့်နိုင်ငံတော်မှပေးသည်)၊ သင်ကဲ့သို့အမှိုက်များသည်တိုင်းပြည်၏ပညာရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ် , အားလုံးဝေဖန်ကြသည်နှင့်ပင်အသိပေးကြသည်မဟုတ်, အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာနှင့်အတူလူပေါင်း2နောက်ဆုံးအစီအစဉ်နှင့်အတူအထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံး, PC ကို 200 နည်းပညာကျောင်းများ၏ကွန်ပျူတာဗီရိုတပ်ဆင်ထား, သင်ရှိသည်တောင်အမေရိကရှိသင်ပြချင်သောအားသာချက်အားလုံး၏ menu ကို, ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းအများဆုံးကြီးထွားလာသော software ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း။
ငါအရောင်ရှိတဲ့မှန်တွေကိုမရောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မီးခိုးရောင်အားလုံးကိုမတွေ့ရဘူး၊ ငါ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်။ ဦး နှောက်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းရှိတဲ့လူတွေဟာအနတ္တပြောဆိုနေကြတယ်လို့ထင်တယ်။
Sergio ရိုးရှင်းသော Operating Systems Engineer (LPI3) ။
လေးစားပါတယ် ဒီနေရာမှာဗင်နီဇွဲလားမှာပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးတယ်။ ထို့အပြင်အစိုးရသည်ကလေးများအားပထမတန်းမှခုနစ်တန်းအထိ“ Canaima GNU / Linux” ဟုခေါ်သည့် Debian အခြေပြု GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုတွင်အလုပ်လုပ်သောဤနေရာတွင်« canaimita »ဟုခေါ်သော netbook ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒီစာရင်းထဲမှာဗင်နီဇွဲလားမပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းအခုတော့ငါမသိဘူး။
Jhasua Guerra အားပြန်ကြားပါ
မက္ကဆီကိုသည်စာရင်းတွင်မပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းသည်
Hector lopez ဟုသူကပြောသည်
ဗင်နီဇွဲလားတွင်အများပြည်သူအုပ်ချုပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းအများစုသည် GNU / LINUX ကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ပျူတာ ၂ သန်းကျော်သည် Canaima (ပညာရေးအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသော distro) ဖြင့်ပုံမှန်လည်ပတ်သောစနစ်ဖြင့်လာသည်။
Hector Lopez အားပြန်ကြားပါ
ပျော်ရွှင်သော Debian အသုံးပြုသူ
Eudes Pereira ဟုသူကပြောသည်
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် Debian ကို အခြေခံ၍ Canaima ဖြန့်ဖြူးမှုသည်ကျောင်းသားများအားပေးသောရုံးနှင့်အိမ်အတွက်လည်ပတ်မှုစနစ်အနေဖြင့်ကောင်းမွန်သော Laptop ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုသည်။
Eudes Pereira အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Eudes၊ သင့်နိုင်ငံမှာ Windows ကိုချီလီလိုအတင်းအကြပ်မလုပ်ခိုင်းတာကိုဝမ်းသာပါတယ်။ ကျောင်းကအဲဒါကို“ Master and Lord” လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ရိုးသားစွာလူအများစုက Linux တင်ဆက်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအကြောင်းသိပ်မသိကြဘူး။ ။
ငါ Ubuntu or Mint ကိုဗင်နီဇွဲလားမှာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပိုလိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Debian ကသုံးစွဲသူများအားပညာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများကိုပြproblemsနာများစွာပေးနေသဖြင့် Debian ၏မှီခိုမှုအများစုသည်ခေတ်ကုန်သွားပြီ၊ Ubuntu ယူဆောင်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုသူတို့သိထားမယ်ဆိုရင်အပြောင်းအလဲကသိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ပါ၊ ငါ Canaima7ကနေ 3.0 အထိအသုံးပြုနေတယ်။ ဗားရှင်း 5.0 ဟာ ၄.၁ ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးကျဆင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ 3.1 ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗားရှင်း ၄.၀ နဲ့ ၄.၁ မှာပရိုဂရမ်များစွာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ menu menu နဲ့ window panels တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးအရာအားလုံးကို restart လုပ်ဖို့ "gnome-session" ကို run ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြီးလေးတဲ့အမှားတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။ ၎င်းသည် Debian bug တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါဗားရှင်း 4.0 ဖြင့်၎င်းသည် Cinnamon desktop နှင့် Debian အတူတူပင် ဖြစ်၍ အလွန်လေးလံသည်! ထိုသို့သောစားပွဲခုံကိုအသုံးပြုရန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အလုပ်မဟုတ်ပါ။ သူတို့က Mate ကိုပြောင်းလဲနှင့်တကယ်အကြံပြုမဟုတ်လျှင်! Mint (သို့) Ubuntu ကိုယ်တိုင်သုံးခြင်း။
ငါ MX မှ LINUX ကိုအသုံးပြုသည်
ဒံယလေက Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည်၎င်းတို့၏စင်မြင့်ပေါ်ရှိအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) OpenSouce ကိုသာအသုံးပြုရန်ဥပဒေရှိသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် GNU / Linux Forced hahahaha ကိုအသုံးပြုသည်
Daniel Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ပညတ္တိကျမ်းတည်ရှိသော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာလျှောက်ထားမှုနှုန်းမှာ ၁၀% အောက်သာရှိသည်။
ဂူဂဲလ်နှင့်၎င်း၏ cloud တို့သည် Debian ကောင်းကင်သို့သွားသည်